2020 – Ministry of Foreign Affairs
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး 2020 Commemorative Amarapura Day အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
ထိုင်ဝမ်(တရုတ်-တိုင်ပေ)၌ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်ခဲ့
ဂျာမနီနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဘာလင်-အာဆီယံကော်မတီ (BAC) အဖွဲ့ဝင် သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာစားပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
H.E. Daw Hmway Hmway Khyne concurrently accredited as Ambassador of Myanmar to Romania
H.E. Daw Kay Thi Soe concurrently accredited as Ambassador of Myanmar to Hungary
စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့
ဗြိတိန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ASEAN London Committee-ALC အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ခြင်း
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးတို့ Video conferencing ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ASEAN Committee in Seoul (ACS) ၏ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားသို့ ပါဝင်တက်ရောက်